၀င်းဒိုးစ် တက်မလာလို့ - MYSTERY ZILLION
May 2008 edited October 2008 in Windows XP
ကျနော့်ဆီက စက်အကောင်းတလုံးမှာ Norton Ghost 10 တင်လိုက်တယ်။
ဟာ့ဒစ်အသစ်တလုံးကို secondery တပ်ပြီး Drive-C ကို ကော်ပီကူးလိုက်တယ်။
ဟာ့ဒစ်အသစ်နဲ့ ဖွင့်ကြည့်တာ ၀င်းဒိုးစ်လိုဂိုပေါ်ပြီး ရပ်နေတယ်ဗျာ။
မောက်စ်နဲ့ ကီးဘုတ်ကတော့ အလုပ်လုပ်နေတယ်။ မောက်စ်ရွှေ့လို့ရတယ်။ ကီးဘုတ်မီးတွေ ပိတ်/ဖွင့် ရတယ်။
ရက်ပစ်ရှဲ တော့ပစ်အောက်မှာ ကိုဒီဘီအေတင်ပေးတဲ့ XP BlackMoon ကို ကျနော်ဆွဲချပြီး အင်စတောကြည့်တာ အားလုံးပြီးသွားချိန်မှာ Boot form HDD, Setup Windows စသဖြင့်ရှိတဲ့ စာမျက်နှာဘဲ ပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဗျာ။ သုံးခေါက် လေးခေါက်သွားလဲ အဲလိုဘဲ ပြန်ပေါ်လာတယ်။
ကိုအိတ်ဇိုက်တာလည်း ဆွဲချထားတယ်မဟုတ်လား။ အင်စတောကြည့်ပြီးပြီလား။ အဆင်ပြေမယ့်နည်းလေး ပြောပြကြပါဦး။
ကိုဇူးလူးရေ . .
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုပဲ window logo ပဲတက်ပြီး ဘာမှ ဆက်မလုပ်တာ ဖြစ်ဘူးတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလို့ စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ window ပြန်တင်လိုက်တယ်။ အဆင်တော့ပြေသွားတာပဲ။ window တင်ထားတဲ့ partation ထဲက data တွေကအရေးမကြီးဘူးဆိုရင်တော့ window ပြန်တင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ ကျန်တာတော့ ကျွန်တော်လည်းမလုပ်တက်ဘူး။ လုပ်တက်တဲ့သူတွေ ဖြေတာကို စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။
ပထမစက်တလုံးက Norton Ghost 10 သုံးပြီး ဟာ့ဒစ် ကော်ပီကူးတာပါ။
ဒါမှမဟုတ် Setting တခုခု ပြန်ပြောင်းပေးဖို့ လိုတာလားဆိုတာကို သိချင်လို့ပါ။
ဒုတိယစက်ကတော့ Windows XP SP3 Black Moon Edition ကိုသုံးပြီး ၀င်းဒိုးစ်တင်တာပါ။
အဲဒါလည်း Black Moon choice screen ဘဲ တပြန်လဲလဲ ပြန်ပေါ်နေလို့ပါ။
Black Moon CD ကဘဲ တခုခုလိုနေတာလား
ကျနော်အင်စတောတာဘဲ တခုခုမှားနေတာလား သိချင်လို့ပါ။
yeman ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘာမှလုပ်မရရင်တော့ ကျနော့်မှာရှိတဲ့ XP SP2 နဲ့ဘဲ ပြန်တင်ကြည့်ရမှာပေါ့။
Black Moon တော့ မသုံးဖူးပါဘူး။ တခြား XP SP2 black edition, sp3 ultimate edition လေးတွေတော့ သုံးဖူးပါတယ် အဲလိုမျိုးတော့ မဖြစ်ဖူးပါဘူးခင်ဗျာ..။
မုန်တိုင်းပြီးလို့ တည်ငြိမ်သွားရင် အိပ်ဆစ်တာ ဘယ်လိုနေလဲ သုံးလို့ရလား စောင့်ကြည့်တာပေါ့ ဟိဟိ။
ဟုတ်ပါ့ ကိုဒီဘီအေ ရေ
လူလည်း မူးသွားပြီ (ဘီယာဖိုး မကုန်တော့ဘူး ... ဟီး)
ခင်ဗျား ဘလက်မူး အင်စတောပြီးရင် အဆင်ပြေ/မပြေ တချက်လောက် အကြောင်းပြန်ပါဗျာ
နော်တန် ဂုတ်စ် 10 နဲ့ ဟာ့ဒစ်ကော်ပီတာ ၀င်းဒိုးစ်လိုဂိုဘဲပေါ်ပြီး ရပ်နေတာရော ...
ဘယ်လိုပြန်ပြင်လို့ရသလဲ ... သိရင်ပြောပါဦးဗျာ
ကျနော့်ဆီက သင်တန်းသုံးစက်တွေမှာ တလုံးပြီးတလုံး ဆော့၀ဲအမျိုးမျိုး အင်စတောနေရတာကို
နော်တန်ဂုတ်စ်10 နဲ့ကော်ပီလို့အဆင်ပြေသွားရင် အများကြီး သက်သာသွားမှာဗျ။
အရင်က ဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်ဘူးတဲ့ ဘော်ဘော်တွေ ပြောတာ ကြားဖူးတာတော့
သူတို့က PowerQuest လားသုံးတယ်တဲ့၊ စက်တွေက configuration အတူတူပေါ့၊ HDD လေးလိုက်တတ်ပြီး copy ပွားလိုက်ဆိုဘဲ ကျွန်တော် သေချာအောင် မေးပြီး software ရှာပေးမယ်လေ နော်။
လိုဂို ပေါ်ပြီ ရပ်နေတယ်.. ဆိုရင်တော့ system mode မှာ ပြဿနာဖြစ်နေတယ်..ထင်တယ်...
ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲလို့တော တိတိကျကျ စမ်းသပ်ကြည့်ပါမယ်...
Windows XP SP3 Black Moon Edition ကြောင့်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်...
သားလဲ သိဘူး - ဟီး Hardware သာ လေ့လာနေတယ် ဘာမှလဲသိဘူးဗျာ ....
နောက်ပြီး ထင်တယ် ... H/W Configuration မတူလို့ဖြစ်မလား ... ဒါမှမဟုတ် ... Window Setting တွေကျန်ခဲ့
လို့လားမသိပါဘူး .. Ghost 8.0 or 9.0 ကိုပဲ သုံးကြည့်ပါလား ... 10 က အဆင်မပြေတတ်ဘူးလို့သိရလို့ပါ။
ကို Zulu နဲ့ ကို Yeman တို့စက်မှာ Black Moon Edition တင်လို့မရတာ OS ကို CD ပေါ် Burn တဲ့ ပုံစံ မတူလို့ထင်တယ်။
ိdownload ဆွဲထားတဲ့ Black Moon Edition OS ကို ကျွန်တော့်လို Ultra ISO နဲ့ Burn ပြီး Install လုပ်ကြည့်ပါလား။
အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အောက်မှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ BlackMoon ရဲ့ Screen Shot ကိုတင်ထားပေးပါတယ်။ Install လုပ်လို့ရကြောင်းပြတာပါ။ :d:d:d
ultra iso ဘယ်မှာယူရမလဲခင်ဗျာ။ ပို့မယ့်ပို့ နာဂစ်ရောက်တဲ့အထိပို့ပါလား ... ဟီး
ကျနော့်လဲ အရင်က ရှိခဲ့သလိုလို။ မသေချာဘူး။ ခုစက်ထဲတော့ ပြန်ရှာကြည့်နေတယ်။ အခြားလိုသူတွေရှိရင်လည်း အဆင်ပြေအောင် MZ Download Center မှာပြန်တင်ပေးပါလား
အဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေ download ဆွဲလို့ရပါပြီ။ :d:d:d
အိမ်က PC မှာ Windows တက်မလာတော့ဘူးဗျ... POST စခရင် တက်လာပြီး ကာဆာတစ်ခုပဲပေါ်တော့တယ်... ဘာမှတက်မလာတော့ဘူး... ပြန် ရီပဲလုပ်ရမှာလားဗျ...
တစ်ခြားဘာနည်းလမ်းရှိသေးလဲ... ဘာဖြစ်တာလဲ...မသိ... လုပ်ကြပါဦးဗျ:((
ကျွန်တော်ဆီမှာ Dell Vostro တွေ ကို network ကနေ clone ရိုက်ချင်လို ့ပါ။ Acronis နဲ ့ရတယ်လို ့ကြားဖူးပါတယ်။ ဘယ် Version နဲ ့ရနိုင်မယ်ဆိုတာပြောပြစေချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာပါ နည်းပေးစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် Notorn Ghost ကိုမသုံးပါ။
R-Drive Image 4.3 ကိုသုံးကြည့်ကြပါ။
အဲဒီsoftware ကို C: ခန်းထဲ install လုပ်ပြီး
C: ကိုပဲ backup လုပ် ပြီးတော့ C: ထဲကိုပဲ ပြန်ဖြန့်တာ ရတယ်ဗျ။
ဒီမှာ Down ပါ။
အသေးစိတ်ကို အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။
* New partition creation. Data fromadisk image can be restored onafree (unpartitioned) space on any place onahard disk. The size of the restored partition can be changed.
* Image files verification. You may check if your image files are good before you store them or restore datafrom them.
* Windows Vista and 64 bit processors support. New R-Drive Image version supports all Windows Vista operating system and 64 bit processors.
Express recovery သုံးပြီး boot.ini file ပြန်ရေးကြည့်ပါလား..
fix boot လို ့လေ......
Sometimes WinXP installer like above mention WinXPBlackMoon are like that because they are tweaked versions and may be not work on all System Unit that's why you got that unusual manner. There is another topic about HDD imaging I used Acronis True Image and it is much better than Norton Ghost. Here download it and test how it is suited. There is one thine important is all clone hdd size is no matter but motherboards and vga should be exact same. that's will make sure of working properly after clone hdds. Acronis True image v9.5 has univeral restore embeded in it but i haven't test it yet.
ကျွန်တော်ဆီမှာ Dell Vostro တွေ ကို network ကနေ clone ရိုက်ချင်လို ့ပါ။ Acronis နဲ ့ရတယ်လို ့ကြားဖူးပါတယ်။ ဘယ် Version နဲ ့ရနိုင်မယ်ဆိုတာပြောပြစေချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာပါ နည်းပေးစေချင်ပါတယ်
this acronis can image from network but for making sure is don't image very important server or data from network. may be data lost therefore install on each server and image it from that each server or domain controller. Making sure is raid controller servers only version 9.5 above can know raid controllers.